जेलभित्रै पनि ‘धर्म'को प्रचार ! पाष्टरहरु बोलाएर ‘प्रार्थना’ - inaruwaonline.com
जेलभित्रै पनि ‘धर्म’को प्रचार ! पाष्टरहरु बोलाएर ‘प्रार्थना’
प्रकाशित मिति: बुधबार, बैशाख २६, २०७५ समय: ८:३७:४६
सुर्खेत, २६ वैशाख । छ वर्षअघि वीरेन्द्रनगर–१ स्थित अनुग्रह चर्चका केही ‘विश्वासी’ सहयोगको हात फैलाउँदै जिल्ला कारागार पुगे। कैदी–बन्दीका लागि खाद्यान्न सहयोगका लागि पुगेका उनीहरु छ वर्षयता कारागारलाई ‘धर्म प्रचार’ को केन्द्र बनाउँदै आएका छन्।
जेलभित्र सजाय भुक्तान गरिरहेका कैदी–बन्दी मात्रै होइन् उनीहरुका परिवार र सन्तान खोज्दै प्रभुका अनुयायीहरु घरैसम्म पुग्छन्। त्यहाँ पनि आर्थिक, खाद्यान्न, शैक्षिकलगायतका सहयोगको नाममा आफ्नो सञ्जाल विस्तार गरिरहेका छन्। नागरिक दैनिकबाट